danna, Mpanoratra ao amin'ny BikeHike
Efa ho fito taona aty aoriana, i Christopher Paolini dia hamoaka ny bokiny fahadimy avy amin'ilay andian-tantara The Cycle Fandovana mitondra ny lohateny hoe The Fork, the Witch, and the Worm. Ny tantara fantasy izay
Cycle 25 an'ny America's Next Top Model dia tsingerina ho avy izay novinavinaina ho voalohany amin'ny VH1 amin'ny taona 2019. Hatramin'ny taona 2020 dia tsy nisy fanambarana ofisialy natao.
Tsia, tsy hanitsy ny fandaharam-patorianao ny minia miari-tory mandritra ny alina na matory amin'ny faran'ny herinandro. Raha ny marina, ny fanaovana ireo zavatra ireo dia mety hanimba bebe kokoa ny fandaharam-patorianao.
Nitombo ny Cardiovascular, ny tanjaky ny hozatra ary ny fandeferana amin'ny fanatanjahan-tena. Ho fanampin'ny hakitroky ny taolana lehibe kokoa, ny hazakazaka ho fanazaran-tena cross-training dia afaka manome traikefa aerobic hafa tanteraka ho an'ny mpitaingina bisikileta, mitarika.
Ny Levonorgestrel dia hita ao amin'ny pilina fanabeazana aizana, fa ny Plan B dia misy fatra avo kokoa izay afaka manova ny haavon'ny hormonina voajanahary ao amin'ny vatanao. Ny hormonina fanampiny dia mety hisy fiantraikany amin'ny vatana
Hafiriana no sitrana amin'ny tsingerin'ny testosterone? Saika ny lehilahy rehetra dia niverina ho ara-dalàna ny tahan'ny testosterone telo volana taorian'ny faran'ny tsingerina, ary
Hafiriana no tokony ho tsingerin'ny steroid voalohany anao? Amin'ny ankapobeny, ny mpampiasa dia handray steroïde mandritra ny enina herinandro ka hatramin'ny 16 herinandro amin'ny fotoana iray, arahin'ny herinandro maromaro amin'ny fandraisana fatra ambany.
Ny valiny fohy momba ny hoe hahatonga ny tongotrao ho lehibe ny bisikileta na tsia - tsia. Mazava ho azy fa manatsara ny hozatry ny tongotra ny bisikileta, fa toy ny fanazaran-tena aerôbika,
Eny, afaka manara-maso ny dianao ny Fitbits amin'ny alàlan'ny teknolojia antsoina hoe SmartTrack ary tena manampy amin'ny mpitaingina bisikileta amin'ny fomba maro izy ireo. Iray miavaka amin'ny vokatra Fitbit maro,
1 2 ... 26,498 Manaraka